IHemgrinder luphawu lweShenzhen Gesheng Technology Co, Ltd.
IHemgrinder izibophelele kumsebenzi olula: ukubonelela ngexabiso elisezantsi, ezona mveliso ziphezulu, kunye neempawu eziphambili kunye noyilo oluhle kakhulu!
Kukho oomatshini bokufaka inaliti abangama-20, oomatshini bokukhuphela abangama-20, i-punch esindayo, ukuchaneka kwe-CNC lathe, kunye nokukhutshwa konyaka ngamnye kwezigidi ezingama-20. Iimveliso ukusuka kwimveliso ukuya ekuhanjisweni ziyahlolwa, ngexabiso kunye nomgangatho unenzuzo epheleleyo! Iimveliso zethu zithengiswa kwihlabathi liphela kwaye zonwabela idumela elihle. Intembeko ye-Hembrinder's, amandla kunye nomgangatho wemveliso sele yamkelwe lushishino. Sinethemba lokufumana abathengisi abaninzi abavela kumazwe awahlukeneyo.
Kungumgaqo wethu ukunciphisa iindleko, ukuphucula ukhuphiswano kwimarike kunye nokufumana izibonelelo ezifanayo kunye neziphumo zokuphumelela. Umgangatho kuqala, umthengi kuqala, ukugxila kokugcina ingqibelelo, ukuphuculwa kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha yinto yethu. Wamkela isikhokelo kunye notshintshiselwano ngoogxa bezamashishini!
Kususela ekusekweni kwayo, uphawu lubambelele ezintathu "ezilungileyo, ukuthembeka kwabathengi, inkonzo elungileyo". Ukuze uhlangabezane nemfuno yentengiso kunye nokukhusela umdla wabathengi
Ifilosofi yeshishini: ingqibelelo, ukugqwesa, ukuphumelela!
Umxholo wenkonzo: bonke abasebenzisi njengeyona nto iphambili!
Xa sijonga kwixesha elidlulileyo, sizele yinkanuko, sijonge kwikamva, sizithemba ngakumbi! IHemgrinder isoloko ithatha ishishini leshumi "lokulandela umgangatho ogqibeleleyo kunye nokudala imbonakalo yasimahla", ngenkonzo enyanisekileyo yenkonzo, inkqubo yenkonzo egqibeleleyo kunye nomoya ongapheliyo
Wamkelekile abathengi ukuba beze kuxoxa, baphande kwaye banike isikhokelo!